Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka (NSUEM)
Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka
Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka Details
gaabinta : NSUEM
aasaasay : 1929
Ardayda (qiyaastii.) : 13500
Ha iloobin in aad wada hadlaan Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka
Qor at Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka
Novosibirsk State University ee Dhaqaalaha iyo Maamulka
Waxaa jira 4 Caqlina at NSUEM:
Department of Social Studies iyo Humanities
Currently, waxaa jira 29 waaxaha jaamacadda. qalin NSUEM waxaa loo tababaray in ay noqdaan IT takhasuska, qareenada xirfad, maamulayaasha kala duwan, shaqaalaha xiriirka caalamiga ah, heerkoodu sareeyo dalxiiska, iwm.
Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka leeyahay nidaam multilevel waxbarashada dheeraad ah, sida undergraduate, postgraduate, iyo barnaamijyada phD. Waxaa intaa dheer, waxaa Board of Studies wadashada ka shaqeeya jaamacadda.
NSUEM Business College waa hay'ad xirfadda gaarka ah ee beeraha badan. NSUEM firfircoon fulisaa gobolka-of-the-art teknoolajiyada waxbarasho: jilid xirfadeed, seminaaro, farsamooyinka mashruuca, iyo on-line waxbarashada.
Keentay waxbarashada dhaqanka-oriented ah, ku dhowaad 90 boqolkiiba NSUEM qalin helo shaqo ka dib markii ay bilaabaan. NSUEM waa xarunta gobolka waxbarashada postgraduate: Barnaamijka MBA waxay bixisaa tababarka ku Katiinado cad, Barnaamijka APTECH waxaa diiradda lagu saaray tababarka ku takhasusay IT. Sidoo kale waxaa jira barnaamijyo waxarashada iyo barnaamijyo tababar sare. Iskaashiga aan la leenahay jaamacadaha iyo ururada caalamiga ah waa qayb muhiim ah oo nolosha NSUEM keentay in barnaamijyada exchange arday firfircoon.
Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka ayaa ka badan 12 000 ardayda ku qoran. Tirada macalimiinta jaamacadaha waa in ka badan 430, iyaga ka mid ah 53 Dhakhaatiirta of Science iyo 232 PhD of Science.
NSUEM firfircoon oo si joogto ah uu yeesho xarumo ay. bannaan guud ee goobaha NSUEM (ay ka mid yihiin block-dugsiyeedka cusub) wuxuu ku saabsan yahay 50 000 mitir oo laba jibbaaran. Waxaa jira pool raaxo leh oo casri ah dabaasha.
NSUEM taageertaa noocyada kala duwan ee hawlaha ka baxsan ee ardayda, sida ururada ardayga, qoob ka cayaarka iyo vocal istuudiyaha, dugsiga riwaayadaha a, iwm.
NSUEM ayaa ah manhajka dheeraadka ah Trajectories Mashruuca. trajectories ah manhajka dheeraadka ah waa hab cusub oo duurka ku, kuwaas oo ah kuwa gaarka ah ee Russia. NSUEM ka kooban yahay 7 trajectories manhajka dheeraadka ah ee.
Kuliyadda dhaqaalaha waa hoosaadka qaabeedka NSUEM
In 2014 talaabo cusub oo horumarinta ayaa bilaabay in NSUEM, gudahood dhiska University ee Machadyada Dhaqaalaha iyo Maamulka la mideeyey Kulliyadda dhaqaalaha.
At Kuliyada daqiiqad dhaqaalaha waa ugu weyn NSUEM by tirada ardayda.
Direction khayraadka Human
Direction of State iyo maamulka degmada
Kulliyadda Bulshada iyo Science Bani'aadamnimada
Kulliyadda Bulshada iyo Science Bani'aadamnimada waa hoosaadka qaabeedka NSUEM.
The dalab Kulliyadda 9 beeraha:
waxbarashada gobolka Dibadda;
xiriirka Caalamiga ah;
Advertising iyo xiriirka dadweynaha;
Kulliyadda Warfaafinta iyo Technologies
Kulliyadda Warfaafinta iyo Technologies waa hoosaadka qaabeedka NSUEM
Maalmahan ardayda ee Kulliyadda waxaa loo tababaray in 7 tilmaamaha ah ee macluumaadka iyo hal-abuurka beerta. tilmaamaha All dhamaystir u midba midka kale iyo in la siiyo tababar takhasus aad u fiican oo duurka ku ah nidaamka maamulka ganacsiga.
Macluumaadka iyo Technologies dalabyo awood 7 meelaha:
informatics Fundamental iyo InformationTechnologies;
Systems Warfaafinta iyo Technologies
Maamulka Deegaanka iyo Khayraadka Dabiiciga ah
Kulliyadda Law waa hoosaadka qaabeedka NSUEM.
In 2014 sida ay baahida ka mid ah horumarinta barnaamijyada waxbarashada, NSUEM bilawday Kuliyada Sharciga. "Rugta Legal" waa qayb ka mid ah Kuliyadda ah. Kulliyadda waxaa u janjeedha tababarka qareenada ururada ee dhinacyo kala duwan dhaqaalaha. qalin The shaqeeyaan dhismayaasha dowladda kala duwan; xil ee waaxaha ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Ruushka.
Kulliyadda Law dalab waxbarashada ee Law
In 1929 Siberian Institute of Dhaqaalaha Qaranka ayaa la bilaabay in Novosibirsk, oo ahayd mid ku salaysan in dhismaha casriga ah ee Novosibirsk State naqshadda iyo farshaxanka Academy. Ujeedada ugu weyn ee ay ahayd in ay bixiyaan maamulayaasha dhaqaale loogu talagalay dhaqaalaha qaranka. Baridda shaqaalaha ee 1929 koobnayd 10 dadka iyo in 1931 kor u helay in ay 57, dhexdeeda: 4 Professor, 19 Professor associate.
Sannaddii kowaad tacliinta Institute bilaabay 4 Caqlina: dhaqaalaha loo qorsheeyay, warshadaha, sarrifka wax soo saarka iyo qaybinta, maareynta dhaqaalaha iyo beeraha.
In 1967 sida laga soo xigtay si Administrative by wasiirka waxbarashada sare iyo dugsiga sare ) Novosibirsk Institute of Dhaqaalaha Qaranka (SAGAALKA) ayaa la bilaabay oo ku saleysan All laanta warqadihiisa Midowga dhaqaale-iyo-dhaqaale Institute. SAGAALKA la bilaabay on the 1 of August 1968. Raktarka kowaad wuxuu ahaa Victor Pervushin.
In 1986 Peter Shemetov noqday Raktarka. Waxa uu ahaa loogu talagalay on diyaarinta pre-galo iyo ilaa keeno nidaamka heer multi a waxbarasho ee machadka. Waxa uu bilaabay waxbarashada shahaadada PHD iyo xarunta daabacaadda iyo publications.
meel muhiim ah la siiyey-sare pre awood waxbarashada, oo markii dambe loo beddelaa lyceum Dhaqaalaha - ugu horeysay ka dambeeya Urals ah. Sanadihii kuwii halkaas joogay yaraanta khubarada aqoon berrinkii dhaqaalaha (maal-, xisaabaadka iyo iwm). Oo machadka la kulmay baahida this.
In 1994 Machadka helay xaaladda Academy ah, iyo in 2004, xaaladda Jaamacadda. xaaladda University ayaa keentay NSUEM in magac cusub: Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka.
Qaar ka mid ah qaababka casriga ah NSUEM la abuuray oo wakhtiga post-Soviet.
Ma rabtaa wada hadlaan Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Novosibirsk State University of Economics iyo Maareynta on Map
Photos: Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka rasmiga ah Facebook
Novosibirsk State University of dhaqaalaha iyo dib u eegista Management
Ku biir si ay ugala hadlaan of Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka.